‘जगदिश श्रीमान मात्रै थिएनन्, शक्ति पनि थिए’ |
प्रकाशित मिति :2016-02-21 14:46:56
कुरा जगदिश घिमिरेबाटै सुरु गरेँ। कुरा के निकालेकी थिएँ, उनका आँखा रसाइहाले। हिंसामा परेर रुँदै हिँडेका सैयौं चेलीको आँशु उनले पुछेकी छन्, तर अरुलाई बलियो हुन हिम्मत दिने उनले आफूलाई भने थाम्न सकिनन्।
दुर्गा घिमिरे र जगदीश घिमिरेको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमती भन्दा माथि थियो। घिमिरे एक किसिमले उनका लागि शक्ति थिए। जसको बलमा उनलाई काम गर्ने हौंसला मिल्थ्यो। उनले भनिन् ‘उनी सधैँ मेरो मानसपटलमा आईरहन्छन्, जुन विर्सन मलाई अत्यन्त कठीन भइरहेको छ।’
श्रीमान जगदिश घिमिरेका साथ दुर्गा घिमिरे
श्रीमान जगदिश प्रति उनको छुट्टै सम्मान र प्रेम थियो। विं सं २०३१ सालमा उनीहरूले प्रेम विवाह भएको थियो। वि.स २००५ सालमा बुवा गणेशप्रसाद आचार्य र आमा शान्ता आचार्यका ७ दिदी बहिनी र ४ दाजुभाई मध्ये ५ औं सन्तानको रुपमा सुनसरीमा दुर्गा घिमिरे जन्मिएकी थिइन।
सानैदेखि निकै शान्त र असाध्यै गम्भीर स्वभावकी भएपनि उनीमा सचेतना र थोरै विद्रोह पनि थियो। विद्यालय र उच्च शिक्षा विराटनगरबाटै गरेकी घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एम ए र कानुनमा स्नातकसम्मकोे अध्ययन गरेकी छन्। कानुन पढेर कालो कोट लगाउने उनको इच्छा थियो, तर पूरा हुन भने सकेन। ‘सबैले सोचेका कुरा र देखेका सपना कहाँ पुरा हुन्छ र ? मेरो पनि हुनुपर्छ भन्ने थिएन, भएन’ उनले भनिन्।
उनलाई महिलाका लागि कानुनी पेशा उत्तम हो भन्ने लाग्थ्यो। ‘स्वत्रन्त्र रुपमा काम गर्न, महिला अधिकारको विषयमा खुलेर बहस गर्न र नीति नियमलाई समेत चूनौति दिन सकिने यो पेशा मेरा लागि उत्तम थियो, तर बिडम्वना म वकील हुन सकिनँ। अधिकारको आवाज उठाउन सक्ने चाहीँ पक्कै भएँ होला जस्तो लाग्छ’ यसो भनिरहँदा आफूले गरेको काम प्रति मिलेको सन्तुष्टि उनको अनुहारमा प्रष्टसँग झल्किन्थ्यो।
फुर्सद भए अहिलेपनि किताब लिएर बसिहाल्ने उनको बानी हटेको छैन, भन्छिन् ‘मौका मिल्यो कि किताव लिइहाल्छु।’ महिला अधिकारको क्षेत्रमा अाउनु भन्दा पहिला उनी राजनीतिमा संलग्न थिइन्। वि.सं. २०२० सालमा १५ वर्षको उमेरदेखि नै बिद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय उनी २०२७ सालमा स्थापित नेपाली काग्रेंस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक मध्ये एक हुन्। त्यसपछि ०२८ सालमा उनी नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङ्गकी पहिलो अध्यक्ष भइन्।
विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदै उनी ३ पटक पक्राउ परि १३ महिनासम्म जेलमा विताएकी छन्। उनले जेलमा बस्दा लेखेको डायरीलाई ‘जेलको सम्झना’ नाम दिएर पुस्तक निकालेकी छन्। यो पुस्तकले २०५० सालमा उनलाई उत्तम शान्ति पुरस्कार दिलायो। अग्रेंजीमा अनुवाद गरिएको A strange alive women’s memory in the prison नामक पुस्तकले त्यतिवेला निकै चर्चा पायो। योसँगै उनले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत राजनीतिमा लागेकी भनेर सहासी र लडाकु महिलाको उपमा पनि पाइन्।
२०२८ सालमा पहिलो पटक राजनीतिक जनघट कै क्रममा उनको जगदिश घिमिरेसँग भेट भएको थियो। त्यो पहिलो भेट मै आँखा जुध्यो, माया बस्यो। त्यसपछिका दुई वर्ष चिठीबाटै उनीहरूले माया साटे। अन्ततः यो प्रेमले विवाहको रुप लियो। ‘सवैले भन्थे नेतासँग विवाह भयो, बिचार भिन्न भिन्न भएका यी दुईको सम्बन्ध टिकीराख्न सक्दैन’ उनी सम्झिन्छिन् । जगदिश घिमीरे बामपन्थी विचारधाराका थिए। ‘राजनीतिक विचारधारा हामी दुईबीच कहिले आएन। यो विषयमा विवाद भएन, जगदिश मेरा लागि सधैँ प्रेरणा र मार्गदर्शी भएर आए’ दुर्गा घिमिरे भन्छिन्।’जव म बिरामी पर्थेँ, उनी मेरो साथमै हुन्थे, मेरो वरीपरी बसेर मलाई स्याहार सुसार गर्थे, एकपलका लागि पनि आफ्नो आँखाबाट टाढा राख्न चाहँदैनथे’, उनी फेरी गम्भीर बनिन्।
‘हामी एक अर्कामा समर्पित थियौं। उनी मलाई सधैँ भन्थे, समाजसेवा तिमीलाई सुहाउने उत्तम काम हो।’ जगदिशको यही प्रेरणाले नै आफूलाई राजनीतिबाट अधिकारको क्षेत्रमा आउने उत्साह थपेको दुर्गा बताउँछिन्।
सन् १९८७ सालमा जगदीश घिमिरेकै सहयोग र प्रेरणाले उनले महिला बेचविखनविरुद्ध काम गर्न एवीसी नेपाल नामक संस्था जन्माइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रको जागीर र राजनीतिलाई तिलान्जली दिई श्रीमान कै सल्लाहमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उनले हाम फालिन्।
यतिबिध्न माया गर्ने र प्रेरणादायी श्रीमानले उनलाई २ वर्ष अघि २०७० कात्तिकमा सधैँका लागि छोडेर गए। यो नै उनका जीवनमा सबैभन्दा दुःखको क्षण थियो। उनी भन्छिन् ‘उहाँलाई सबैभन्दा मन पर्ने चिज रातो चुरा, गलामा पोते र निधारमा टिका थियो। त्यो फाल्नु पर्दा कुन महिलाको मन रुँदैन होला? म असाध्यै रोएकी थिएँ, मन निकै भाँचिएको थियो।’
‘आफूलाई सम्हाल्दै उनको सम्झना र मार्गदर्शनलाई मनमा राखेर आफ्ना पाईला पुनः अगाडी बढाएकी छु’ उनले भनिन्। श्रीमानको कामको शिलशिलामा बेलायत पुगेकी दुर्गा घिमिरेले २ वर्षसम्म बीबीसी नेपाली सेवामा समेत काम गर्ने मौका पाइन्। थुप्रै राष्ट्रिय तथा अर्न्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा आवद्ध उनले पुस्तक, गीत र लेखहरू लेख्दै आएकी छन्। उनी गोर्खा दक्षिण बाहुलगायत थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित छन्।
प्रकाशित मितिः २०७२ फागुन ९ गते अाईतवार